Masifunde malunga phakathi kwe-80 (ekwabizwa ngokuba yi-80 phakathi kwe-80 okanye i-polysorbate 80) kunye ne-20 (eyaziwa ngokuba yi-20) ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo
1 synthesis of Tween 80 is based on the polymerization of desaturated sorbitol monooleate kunye neethylene oxide. I-synthesis ye-Tween 20: umxube we-polyethylene glycol kunye nenxalenye ye-polyethylene glycol. Phakathi kwama-80 luhlobo lwe-polyol nonionic surfactant, esetyenziswa rhoqo kwi-polysorbate. Isetyenziswa ngokubanzi kulwelo, semi-eqinileyo kunye namalungiselelo aqinileyo, afana ne-O / W emulsifier, i-solubilizer, iarhente yokumanzisa, isasazi kunye nesomisi.
2. Phakathi kokusetyenziswa kwama-20: ukukhawulelana kwediski kunye ne-ethylene oxide, kuba iimolekyuli zayo zinamaqela amaninzi e-hydrophilic polyoxyethylene, ke ngoko ine-hydrophilicity eyomeleleyo, njengesicocisi esinganyangiyo. Ngokuqhelekileyo isetyenziswa njenge-O / W emulsifier, inokusetyenziswa ngokudibeneyo ne-alkyl sulphate okanye ispan yohlobo lwe-emulsifier ukuphucula uzinzo lwe-emulsion. Ingasetyenziselwa ukusombulula ezinye iziyobisi. Umntu ophakathi kwe-80: ixabiso le-peroxide le-Tween 80 alikho ngaphezulu kwe-10, elityheli elityheli ukuya kulwelo olubonakalayo lweorenji; inuka kancinci. Incasa krakra kancinane, kukho imvakalelo efudumeleyo. Iyanyibilika emanzini, i-ethanol, i-methanol okanye i-ethyl acetate, kodwa inyibilika kwioyile yezimbiwa.